Dala umshini wakho we-Arcade nge-Raspberry Pi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
UJuan Luis Arboledas | | Ukusajingijolo Pi
Abaningi bethu yibona ngokuhamba kwesikhathi abahluleka ukuphumelela ukudlala izihloko ezithile nemidlalo esibe nenhlanhla yokuhlala ebuntwaneni bethu. Mhlawumbe futhi ngenxa yalokhu akumangazi ukuthi sifuna, ngangokunokwenzeka, ukwakha owethu umshini we-arcade ongakhumbula ngayo, ngandlela thile, lokho okuhlangenwe nakho okwedlule.
Unalokhu engqondweni futhi ukude nokukhiqiza umshini osebenza ngokuphelele, okulula kakhulu kunalokho ongakucabanga kusukela namuhla emakethe kunamakhithi amaningi asevele ekunikeza, ukuyibiza ngandlela thile, ifenisha ozoqala ngayo, izinkinobho ngisho nokufakwa okuhle kwesikrini ne-hardware, Namuhla ngizokuchazela ukuthi sidinga kanjani kuphela i-Raspberry Pi enokucushwa okuthile ukuze sikwazi ukuyisebenzisela le nhloso.
1 Yini esizoyidinga ukuze sikwazi ukudlala imidlalo yethu esiyithandayo?
2 Silanda futhi sifake i-RetroPie ku-Raspberry Pi yethu
3 Ukufaka i-RetroPie ku-Raspberry Pi yakho
4 Setha i-RetroPie ku-Raspberry Pi
Yini esizoyidinga ukuze sikwazi ukudlala imidlalo yethu esiyithandayo?
Ngendlela eyisisekelo futhi sikwazi ukudlala kunoma yiluphi uhlobo lwesikrini sizodinga izinto ezihlukile, ngesinyathelo ngesinyathelo, esizokhombisa ukuthi ungaqhubeka kanjani nokufakwa kwazo. Uma uzimisele ukuguqula iRasbperry Pi yakho ibe yikhonsoli ye-retro, yilokhu okudingayo:
Ukuxhumeka kwe-inthanethi, kungaba nge-LAN noma i-WiFi
Isilawuli se-Game console
Njengamazwana afinyelela kuleli phuzu, kufanele kuqashelwe ukuthi, uma yonke isoftware isifakiwe futhi sikwazi ukusebenzisa yonke into kahle, singaqala ukucabanga ngokwakha umkhiqizo othuthuke kakhulu lapho sizodinga ezinye izinhlobo zezinto ezifana nekithi yakha ifenisha.ukunikeza isithombe sobungcweti, emakethe kunezinketho eziningi, futhi uyihlomise ngekhiphedi yayo, isikrini ...
Lungiselela i-Raspberry Pi yakho njengeseva yewebhu
Silanda futhi sifake i-RetroPie ku-Raspberry Pi yethu
Ukufeza leyo njongo yokugcina yokukwazi ukujabulela imidlalo yethu kunoma yisiphi isikrini, futhi noma ngabe ekugcineni singalokotha e-arcade yethu, mhlawumbe ukubheja okuthakazelisa kakhulu faka isistimu yokusebenza ye-RetroPie ku-Raspberry Pi yethu. Ngokuyisisekelo sikhuluma ngohlobo lweRaspbian lapho, ngokuzenzakalela, kufakwa isikhombimsebenzisi esenziwe ngokuphelele esivumela ukwethula ama-emulators ahlukile okufanele silayishe ngawo imidlalo yethu ye-retro.
I-RetroPie yehlukile kwezinye izinketho emakethe ngenxa yamathuba ayo wokumisa ahlukile, ukushuba kwesikhombimsebenzisi sayo nokusetshenziswa kwama-emulators emithombo evulekile, into ekugcineni eyenza Noma yimuphi umthuthukisi onentshisekelo angasebenzisana ekuguqukeni kwale software bobabili ngekhodi entsha nangokubika nokulungisa amaphutha angaba khona atholakele. lokho kuzolungiswa ngesikhathi esifushane ngumphakathi.
Kuleli qophelo kufanele sithathe okuthile okubaluleke kakhulu futhi yilokho, noma ngabe iRetroPie ikuvumela ukuthi ulingise izinduduzo ezahlukahlukene, iqiniso ukuthi ngokuya ngeRaspberry Pi esetshenzisiwe singadlala imidlalo ethile noma eminye. Isibonelo esicacile ukuthi uma sinikezela i-Raspberry Pi 1 kuze kube manje ngeke sikwazi ukudlala izinketho ezifana ne-Play Station 1 noma i-Nintendo 64, izinketho ezimbili okungenani, sidinga inketho enamandla kakhulu njenge-Raspberry Pi 2 noma 3. Lolu uhlu lweziduduzo ongazilingisa ngale software:
I-Atari ST / STE / TT / Falcon
I-Advance Advance yomfana
Uhlelo Lokuzijabulisa lweNintendo
Uhlelo lwe-Super Nintendo Entertainment
Uhlelo lweSega Master
Sega Mega Drayivu / uGenesise
Ekugcineni, kufanele kuqashelwe ukuthi iRetroPie, sibonga ngqo umphakathi omkhulu wabathuthukisi abalandela iphrojekthi, namuhla iyahambisana nenani elikhulu labalawuli ngaphandle kwesidingo sokufaka noma iyiphi isoftware eyengeziwe. Sinesibonelo sezilawuli ezihambisanayo lapho singasebenzisa noma yikuphi ukulawula kwe-Play Station 3 noma i-Xbox 360.
Ukufaka i-RetroPie ku-Raspberry Pi yakho
Uma sesilungiselele yonke i-hardware, sekuyisikhathi sokuqala ukufaka i-RetroPie ku-Raspberry Pi yakho. Okwamanje kunezinketho ezimbili ezihluke ngokuphelele esingakhetha kuzo futhi ezisinikeza umphumela wokugcina ofanayo.
Okokuqala singakwazi faka i-emulator usebenzisa isithombe se-RetroPie nge-Raspbian OS efakiwe. Ngokwami, ngicabanga ukuthi le yindlela elula kakhulu ngoba sizodinga kuphela ukulanda isithombe seRetroPie kuwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi. Okubi ukuthi, ngale ndlela, ukufakwa kuzosula konke okuqukethwe kwekhadi le-MicroSD esilisebenzisayo.
Inketho yesibili izodlula sisebenzise ukufakwa okudala kweRaspbian okungenzeka ukuthi usuvele uyifakile ku-Raspberry Pi yakho. Kulesi sithombe kuzofanela ukuthi sifake i-RetroPie emulator kuphela. Ngale ndlela elula asilahli noma yiliphi ifayili okungenzeka ukuthi sesivele senza ngezifiso kudiski yethu noma ekhadini le-microSD.
Uma ukhethe le nketho yokuqala, vele uzitshele ukuthi ukulanda isithombe seRetroPie kufanele ungene kumenyu yokulanda ekhona kuwebhusayithi yephrojekthi. Lapho iwindi selilayishiwe, kuzofanele ukhethe inguqulo ye-Raspberry Pi yethu bese uqhafaza kulanda. Iphrojekthi inzima impela ukulanda lesi sithombe kungathatha isikhathi eside, ukuxhumana ngejubane eliphakathi nendawo kungathatha cishe imizuzu emihlanu.
Ngalesi sikhathi, kufanele sidlulise okuqukethwe kwesithombe se-RetroPie ekhadini lethu le-microSD. Ngalokhu, yenza lesi senzo Ngokwami ​​ngisebenzisa isoftware ye-Etcher njengoba kulula kakhulu kunokungeza isithombe ekhadini usebenzisa umugqa womyalo noma, uma ungumsebenzisi othuthukile, ngokuqinisekile ulawula kahle noma iyiphi yalezi zinketho ezimbili. Leli phuzu lenqubo, ngandlela thile, livame ukuthatha imizuzu eyi-10. Uma lesi sinyathelo sesenziwe, kuzodingeka sixhume kuphela i-Raspberry Pi yethu ukuhlola ukuthi ukufakwa kwenziwe kahle.
Uma usuvele ufake ukufakwa kwe-Raspbian ku-Raspberry Pi yakho, kuzofanele ukuthi sifake i-RetroPie emulator kuyo. Ukwenza lokhu, into yokuqala okufanele uyenze ukufaka i- git package. Le phakheji ivame ukufakwa ngokuzenzakalela kepha, uma singenayo, kufanele nje ufake imiyalo elandelayo.
Lapho wonke amaphakheji efakiwe futhi evuselelwe, kufanele sifake imiyalo elandelayo ezofaka empeleni i-emulator kunguqulo yethu yeRaspbian.
Lapho senza umyalo wokugcina kufanele sibone isithombe esifana kakhulu naleso engikushiya sona ngezansi nje kwale migqa. Kuyo, njengoba ubona, kufanele sibonise kuphela ukuthi ukufakwa okuyisisekelo kuyenziwa. Le nqubo ingathatha imizuzu eminingana. Lapho ukufakwa sekuqediwe, kufanele siqale kabusha uhlelo lokusebenza.
Setha i-RetroPie ku-Raspberry Pi
Ngalesi sikhathi sesivele sikwazile ukufaka i-emulator, nganoma iyiphi yalezi zindlela ezimbili, kufanele siqhubeke nokulungisa amathuluzi athile azosisiza ekuthuthukiseni kakhulu ulwazi lwethu njengomsebenzisi kanye nezilawuli ezizokwazi ukudlala.
Ithuluzi lokuqala okufanele silimise iSamba. Le software kuzoba yiyo, lapho isikhathi sifika, izosivumela ukuthi sixhumane neRaspberry Pi yethu kusuka kwenye ikhompyutha ukuze sengeze imidlalo. Ukuze senze lo msebenzi kuzofanele sifinyelele ukusethwa kweRetroPie kuphela. Ewindini elilandelayo, mane uchofoze kunketho yokumisa amasheya we-Samba ROM
Le nqubo ingathatha imizuzu embalwa kodwa, uma isiqedile, Manje sesingangena kwi-Raspberry Pi yethu kusuka kunoma iyiphi i-PC exhunywe kunethiwekhi efanayo. Kulokhu, kunoma iyiphi ifolda, ngqo kubha yekheli, sibhala i-IP ye-Raspberry Pi yethu, uma siyazi, noma umyalo // RASPBERRYPI.
Ngalesi sikhathi, ekugcineni, sine-emulator ye-RetroPie elungiselelwe kubhodi yethu yomama futhi, okubaluleke kakhulu, ukuyifinyelela kusuka kwenye i-PC. Manje okumele sikwenze ukusesha ku-inthanethi ikhasi lapho singalanda khona umdlalo esifuna ukuwufaka.
Lapho sesinayo imidlalo esifuna ukuyifakela ikhonsoli ethile yomdlalo, sifinyelela ngeSamba kufolda yekhonsoli yomdlalo esishiwoyo bese sengeza umdlalo. Lapho umdlalo usunamathiselwe kufolda ehambisanayo, kufanele siqale kabusha i-Raspberry Pi yethu ukuze iwuthole futhi sikwazi ukuqala ukudlala.
Njengomniningwane wokugcina, akutshele ukuthi uma sisebenzisa enye yezinguqulo zakamuva zeRetroPie ngokuvikeleka okuphelele ngeke kudingeke ukuthi sifake izilawuli ngoba uhlelo olusebenzayo seluvele lunezishayeli ezidingekayo zekhonsoli yokuzibona. Kufanele nje siwaxhume bese siqalisa kabusha ibhodi. Elinye iphuzu okufanele ulikhumbule, uma kwenzeka sifuna ukudlala ngendlela ewuketshezi kakhulu, iya ngaphezulu kwe-motherboard. Ngenxa yalokhu sifaka imenyu ye-raspi-config. Ukwenza lokhu kucushwa, ngokuzithandela ngokuphelele, kufanele sibhale ku-Terminal:
Lapho lo myalo usuwenzile, iwindi kufanele livele lapho sizokhetha khona inketho 'overclock'futhi, kule entsha, i- inketho Medium 900 MHz.
Njengoba ngishilo, lokhu kulungiselelwa kokugcina kungokuzithandela ngokuphelele futhi kufanele ucabangele izinto eziningana kusukela, njengoba nje i-interface izongena kakhulu, siphoqa iprosesa ukuze lizoshisa, okuthile okungadala ukuthi kugcine kuncibilikile uma singasebenzisi ama-heatsinks akwazi ukwehlisa izinga lokushisa asekelwa kufeni.
Ukwaziswa okwengeziwe: i-programoergosum
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukusajingijolo Pi » Dala umshini wakho we-Arcade nge-Raspberry Pi